Meeting for the preparation of AGM
ရန်ကုန်စက်မူတက္ကသိုလ်/ရန်ကုန်နည်ပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအဖွဲ့ အလုပ်အမှူဆောင်များ ခင်ဗျား
ရန်ကုန်စက်မူတက္ကသိုလ်/ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအဖွဲ့ ပထမအကြိမ်အသင်းသားစုံညီညီလာခံ နှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ပြင်ဆင်ရေး အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
အချိန် ။ ။ညနေ(၃း၀၀နာရီ မှ ၅း၀၀နာရီ)။ ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈၊တနင်္ဂနွေနေ့
နေရာ။ ။ ရန်ကုန်စက်မူတက္ကသိုလ်/ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအဖွဲ့ ရုံးခန်း၊ အခန်း(၁) မြေညီထပ်၊ အဆောင် (၂)၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသုိုလ်
သည်နေ့ ၂၃-၉-၂ဝ၁၈ RIT/YIT/YTU Alumni Association
အောက်မေ့သတိရလျက်ရှိသည့် ကန်တင်းတွင် ထိုင်ကြစဉ်။
စာရေးသူ၊ ကိုမောင်မောင်အုန်း၊ ကိုတင်လတ်၊ ကိုမြင့်ဖေ၊ ကိုမျိုးအေး၊ကိုဝင်းထိန်ဦး။
The AGM elected U Myo Aye (M94) as President.
One Photo shows Hmaw Sayagyi U Wynn Htain Oo (M72) with the Outgoing and Incoming Presidents of RITAA. WHO is extremely happy to have fulfilled his promise of “handing over the torch to the young and not so young”. The oldies will continue to support key projects and share their experience.
RITAA ( 2018 – 2020 )
SDYF (Swel Daw Yeik Foundation) provides Annual Medical Check up for eligible sayas and sayamas.
Executive Committee of Swel Daw Yeik Foundation (SDYF)
U Khin Maung Shwe
Daw Aye Aye Khaing
Ko Myo Kyaw
U Kyaw Kyaw Nge
Joint Treasurers :
Daw Nan Khin Nwe
Daw Sandi Hlaing
Joint Auditors :
Daw Win Win Myo
Daw Khin Wah Oo
Daw Hla Thandar Thein
U Myint Aung (MRTV)
Joint PR Officers :
Daw Soe Soe Nu
U Myo Han
Ko Ye Han
Ko Nyan Tun
Daw Kyi Ngwe
U Tin Maung Naing
U Soe Soe Than
U Nwe Win
Dr. Zaw Lin Aung
U Myint Aung (YTU)
BAPS stands for Burmese American Professional Society.
The Theravada Buddhist Society of America was formed to support the Dhammananda Vihara and its activities.